Noocyo canab ah | February 2020
Ugu Weyn Ee Noocyo canab ah
Khamrigu wuxuu ku qanacsan yahay dad badan oo jecel khamriga iyo dhadhanka. Hooyo kasta waxay la kulantay dhibaatada hargabka ee berry ama khudradda miro ama qasacad cusub. Wakhti ka dib, cabitaan macaan oo qashinka furan ayaa soo gashaa urka dabeecada oo dhadhankiisa. Si kastaba ha noqotee, qof walbana kuma qiyaasin suurtogalnimada sameynta khamri miro leh oo ku salaysan "cabitaan" caadi ah.
Canab ee foomka hybrid "Zilga"
Caleemaha waaweyn ee noocyada kala duwan ee canabka bisil "Zilga" ayaa caan ku ah Baltic, Belarusian, Norwegian, Swedish iyo Canadian rooters. Bacriminta waxay kasbatay aqoonsi caalami ah sababtoo ah kala duwanaanshaheeda, caabbinta barafka sare iyo fududaada beerashada. Faa'iidooyinka, faa'iido darrida iyo sifooyinka daryeelka ee noocyada kala duwan ayaa laga wada hadli doonaa.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo canab ah 2020